သားဖွဈသူ ရမှေနျ ကှယျလှနျခွငျး ၅ လပွညျ့ အလှူလေး ပွုလုပျပေးခဲ့တဲ့ ခငျမွတျမှနျ – Shwe Likes
နာမညျကြျော Idiots band ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ တေးရေး ၊ တေးဆို ဂီတပညာရှငျ၊ အဆိုတျောေ ရမှနျကှယျလှ နျသှားခဲ့ တာ ဒီနဆေို့ရငျ ၅ လတော ငျပွညျ့ ခဲ့ပါပွီ။ အဆိုတျောေ ရမှနျဟာ ပွညျသူတှနေဲ့တ ဈသားတညျးရ ပျတညျ ခဲ့ရငျး ခကျခဲပငျ ပနျးစှာေ နထိုငျခဲ့ရ တာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ ကရငျပွညျနယျမှာပဲ ကှယျလှ နျသှားခဲ့ရတွာ ဖဈပါတယျ။
အဆိုတျောေ ရမှနျဟာ အနုပညာ ပါရမီပါပွီး အရမျးကို တျောတဲ့လူ တဈယော ကျဖွဈတာကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားခြိနျမှာ ပရိသ တျတှဟော မြားစှာ ယူကွုံးမ ရဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ မကွှလှေငျ့ သငျ့ပွဲေ ကှလှငျ့သှားခဲ့ရ တဲ့ကွယျတဈပှငျ့ဖွ ဈတာကွောငျ့ ဆုံးရှုံးမှုတနျ ဖိုးဟာဆိုရငျလ ညျး တကယျကို အဖိုးမဖွတျ နိုငျလှပါဘူး။
ကှယျလှနျ သှား ခဲ့ရတဲ့ သာွး ဖဈသူနှငျ့ ပတျသတျပွီး မိခငျကွီး အဆိုတျောခငျမွတျမှနျဟာဆိုရငျလညျး နစေ့ဉျနှငျ့အမြှေ အာကျမသေ့ တိရနခေဲ့ တာပါ။ မိခငျကွီး ခငျမွတျမှနျဟာ သားဖွဈ သူလေး ထှကျခှာသှားတာ ၅ လပွညျ့တဲ့နမှေ့ာလညျး သားဖွဈသူေ လးအတှကျ ရညျစူးပွီး အလှူလေးေ တှ ပွုလုပျပေးခဲ့ တဲ့အကွောငျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ အခုလိုလေး ရေးတငျထားပါတယျ။
“ဒီနေ့ တှတျပီလေး ဆုံးပါးသှားတာ ၅ လတငျးတငျးပွညျ့ပွီ. ဒီလ 26 th ကလဲ တှတျပီ 33 နှဈပွညျ့ မှေးနမေို့ သူ့အတှကျ ထူးထူးခွားခွားလေး ကုသိုလျကောငျးမွှု ပုဖို့ကွံရှယျ ထားတာ သူကလဲ(တဆငျ့ကွားခံနဲ့) နယျ
(အဖိုးအဖှား ဆှမြေိုးမြားရဲ့ဇာတိ)မှာလှူပေးဖို့ သခြောမှာထားတယျ ဒါပမေဲ့ အခွအေနတှေမေကောငျးလို့ ရကျ‌နဲနဲရှေ့ လိုကျပါတယျ.
(အိမျကဘုရားလဲဘုရားပါဘဲလို့ အကနျတှပွေောပွီး blame မလုပျကွနဲ့နျော! စဉျးစားဆငျခွငျတုံတရားရှိပွီး နားလညျလို့ မသှားသေးတာ. အသကျကိုဉာဏျနဲ့စောငျ့ရှောကျနတော)
(စိတျရငျးအတိုငျးဆို.. အိမျဘုရားတငျမက နယျမွို့‌လေးက မပွညျ့စုံတဲ့ဘုရားစတေီတှေ၊နှမျးပါး ခြို့တဲ့တဲ့ ကြောငျးတှေ၊သံဃာတှကေို တပိုငျတနိုငျလှူဒါနျးထော ကျပံ့ခငျြစိတျ လေးနဲ့သှားခငျြတာပါ Post တဈခြို့တှမှောလို ဘုရားဖူး အကွောငျးပွ ဖလနျးဖလနျးထပွီးအပြျောကြူးဖို့
အစီအစဉျလုံးဝမရှိ ! နကိုကလဲအဲ့လို မနခေဲ့ဖူးပါ. တှတျပီမရှိတော့ထဲက အပြျောဆိုတာလဲ ကိုယျနဲ့မသကျဆိုငျတော့ပါဘူး ဒါပမေဲ့. .သသေူက လဲတောငျး ဆိုထားတယျ သသေူတှမေပွုလုပျနိငျတော့တဲ့
ကုသိုလျကောငျးမှူတှကေို ဆကျလကျ ရှငျသနျနသေူတှကေ ရညျစူးပွီး လှူဒါနျးလုပျကိုငျပေးရမှာလေ !!! ဒါကွောငျ့. . ဘာလုပျလုပျ အပွဈမွငျတတျတဲ့ အကနျစိတျ တဈခုထဲနဲ့ ကြေးဇူပွု၍ လာ blame မလုပျကွပါနဲ့နျော ! လုပျရငျလဲ ဂရုမစိုကျပါဘူး ကုသိုလျကွားထဲ ဒေါသမရောစှကျ ခငျြလို့ပါ)
ဒါကွောငျ့. . .ဒီနတေ့ော့ နအေိမျဘုရားမှာဘဲ ဆှမျး၊ပနျး၊ဆီမီး၊ရခေမျြးကပျလှူပွီး သူ့အတှကျ ဆုတောငျးအမြှဝပေေးလိုကျပါ တယျ.အားလုံးလဲ အမြှရကွ၍ ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ 🌹”
မိခငျရဲ့မတ်ေတာ ဆိုတာ အကွီး မားဆုံးပါပဲနျော။ သားဖွဈ သူကို တဈရကျမှမပကျြ လှမျးဆှတျသတိရနခေဲ့တာ။ ကိုရမှေနျတ ဈယောကျလညျး အနျတီခငျွ မတျမှနျ ပွုလုပျေ ပးနတေဲ့ ကုသိုလျကော ငျးမှုအလှူလေးေ တှကွောငျ့ အေးခမျြးတဲ့ ကောငျးရာမှ နျရာဘဝမှာ ရှိနေ မှာပါ။
နာမည်ကျော် Idiots band ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တေးရေး ၊ တေးဆို ဂီတပညာရှင်၊ အဆိုတော်ေ ရမွန်ကွယ်လွ န်သွားခဲ့ တာ ဒီနေ့ဆိုရင် ၅ လတော င်ပြည့် ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုတော်ေ ရမွန်ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့တ စ်သားတည်းရ ပ်တည် ခဲ့ရင်း ခက်ခဲပင် ပန်းစွာေ နထိုင်ခဲ့ရ တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကရင်ပြည်နယ်မှာပဲ ကွယ်လွ န်သွားခဲ့ရတြာ ဖစ်ပါတယ်။
အဆိုတော်ေ ရမွန်ဟာ အနုပညာ ပါရမီပါပြီး အရမ်းကို တော်တဲ့လူ တစ်ယော က်ဖြစ်တာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာ ပရိသ တ်တွေဟာ များစွာ ယူကြုံးမ ရဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မကြွေလွင့် သင့်ပြဲေ ကွလွင့်သွားခဲ့ရ တဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြ စ်တာကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတန် ဖိုးဟာဆိုရင်လ ည်း တကယ်ကို အဖိုးမဖြတ် နိုင်လှပါဘူး။
ကွယ်လွန် သွား ခဲ့ရတဲ့ သာြး ဖစ်သူနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိခင်ကြီး အဆိုတော်ခင်မြတ်မွန်ဟာဆိုရင်လည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှေ အာက်မေ့သ တိရနေခဲ့ တာပါ။ မိခင်ကြီး ခင်မြတ်မွန်ဟာ သားဖြစ် သူလေး ထွက်ခွာသွားတာ ၅ လပြည့်တဲ့နေ့မှာလည်း သားဖြစ်သူေ လးအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူလေးေ တွ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ တဲ့အကြောင်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလိုလေး ရေးတင်ထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ တွတ်ပီလေး ဆုံးပါးသွားတာ ၅ လတင်းတင်းပြည့်ပြီ. ဒီလ 26 th ကလဲ တွတ်ပီ 33 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မို့ သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြားလေး ကုသိုလ်ကောင်းမြှု ပုဖို့ကြံရွယ် ထားတာ သူကလဲ(တဆင့်ကြားခံနဲ့) နယ်
(အဖိုးအဖွား ဆွေမျိုးများရဲ့ဇာတိ)မှာလှူပေးဖို့ သေချာမှာထားတယ် ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေမကောင်းလို့ ရက်‌နဲနဲရွှေ့ လိုက်ပါတယ်.
(အိမ်ကဘုရားလဲဘုရားပါဘဲလို့ အကန်တွေပြောပြီး blame မလုပ်ကြနဲ့နော်! စဉ်းစားဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီး နားလည်လို့ မသွားသေးတာ. အသက်ကိုဉာဏ်နဲ့စောင့်ရှောက်နေတာ)
(စိတ်ရင်းအတိုင်းဆို.. အိမ်ဘုရားတင်မက နယ်မြို့‌လေးက မပြည့်စုံတဲ့ဘုရားစေတီတွေ၊နွမ်းပါး ချို့တဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေ၊သံဃာတွေကို တပိုင်တနိုင်လှူဒါန်းထော က်ပံ့ချင်စိတ် လေးနဲ့သွားချင်တာပါ Post တစ်ချို့တွေမှာလို ဘုရားဖူး အကြောင်းပြ ဖလန်းဖလန်းထပြီးအပျော်ကျူးဖို့
အစီအစဉ်လုံးဝမရှိ ! နကိုကလဲအဲ့လို မနေခဲ့ဖူးပါ. တွတ်ပီမရှိတော့ထဲက အပျော်ဆိုတာလဲ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး ဒါပေမဲ့. .သေသူက လဲတောင်း ဆိုထားတယ် သေသူတွေမပြုလုပ်နိင်တော့တဲ့
ကုသိုလ်ကောင်းမှူတွေကို ဆက်လက် ရှင်သန်နေသူတွေက ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းလုပ်ကိုင်ပေးရမှာလေ !!! ဒါကြောင့်. . ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်မြင်တတ်တဲ့ အကန်စိတ် တစ်ခုထဲနဲ့ ကျေးဇူပြု၍ လာ blame မလုပ်ကြပါနဲ့နော် ! လုပ်ရင်လဲ ဂရုမစိုက်ပါဘူး ကုသိုလ်ကြားထဲ ဒေါသမရောစွက် ချင်လို့ပါ)
ဒါကြောင့်. . .ဒီနေ့တော့ နေအိမ်ဘုရားမှာဘဲ ဆွမ်း၊ပန်း၊ဆီမီး၊ရေချမ်းကပ်လှူပြီး သူ့အတွက် ဆုတောင်းအမျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်.အားလုံးလဲ အမျှရကြ၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ 🌹”
မိခင်ရဲ့မေတ္တာ ဆိုတာ အကြီး မားဆုံးပါပဲနော်။ သားဖြစ် သူကို တစ်ရက်မှမပျက် လွမ်းဆွတ်သတိရနေခဲ့တာ။ ကိုရေမွန်တ စ်ယောက်လည်း အန်တီခင်ြ မတ်မွန် ပြုလုပ်ေ ပးနေတဲ့ ကုသိုလ်ကော င်းမှုအလှူလေးေ တွကြောင့် အေးချမ်းတဲ့ ကောင်းရာမွ န်ရာဘဝမှာ ရှိနေ မှာပါ။
အခဈြထကျ ငှကေို ဦးစားပေးရှာဖှဖေို့ လိုအပျနတေဲ့ အသကျအရှယျကိုရောကျလာပီလို့ ပွောလာတဲ့ ဇာဇာထကျ
နမေကော ငျးဖွဈပွီး အသံဝငျေ တာ့မယျ ဆိုတဲ့ G Fatt